XOG:- Dowladda oo ka war-heshay arrin halis ku ah shirka IGAD ee dhawaan ka dhici doona Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Dowladda oo ka war-heshay arrin halis ku ah shirka IGAD ee dhawaan ka dhici doona Muqdisho
Warar hoose oo soo baxaaya ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka war-heshay weerar ay Al-shabaab qorsheynayaan inay ka geystaan garoonka diyaaraddaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxayna taasi keentay in dowladda ay jawaab deg deg ah ka bixiso islamarkaana ay ku dhawaaqdo in si KMG ah ay ku joojisay in Khaad la keeno dalka Soomaaliya.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay la socdaan qorshaha Al-shabaab oo ay ku doonayaan inay weerar ku qaadaan goobta uu ka dhici doono shirka urur goboleedka IGAD, 10-ka bishaan aynu ku jirno.
Madaxweynayaasha iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha xubnaha ka ah urur gobaleedka IGAD ayaa la rajeynayaa inay maalinta Sabtida ah ka qeyb-galaan shirkaasi oo ka mid ah shirarka heerka caalami ee lagu qabto magaalada Muqdisho, tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 1985-kii.
Sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo diiday inaynu magaciisa u isticmaalno warbaahinta ayaa inoo sheegay in sababaha sida KMG ah loo joojiyay Khaadka uu yahay in laga cabsi qabo in Al-shabaab ay fursad u helaan inay qafaashaan diyaaradaha Khaadka ka keena dalka Kenya, islamarkaana ay weeraro ka geystaan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, ilo-wareedyadaasi ayaa sidoo kale sheegaysa in ammaanka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde si weyn loo adkeyn doonno, inta uu socdo shirka madaxda urur goboleedka IGAD, waxaana sidoo kale la xadidi doonaa diyaaradaha imaan doonno garoonkaas, si uusan u noqon mid ciriiri ah iyo inaan lagu soo dhex dhuuman rakaabka la socda diyaaradaha caalamiga ah ee halkaasi imaanaya.
Xayiraada dhaq-dhaqaaqa ee garoonka Aadan Cadde ayaa sida la sheegay la qaadi doonaa kadib markii lasoo gaba-gabeeyo shir-weynaha ay yeelanayaan madaxda dowladaha urur goboleedka IGAD islamarkaana ay ka dhoofaan dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa feejignaan dheeri ah ku jiro, iyadoona ammaanka guud ee magaaladda Muqdisho si aad ah loo adkeeyey, gaar ahaan goobta uu ka dhici doono shirka madaxda urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.